Vakoka sy zava-boary : Rahampitso ny dihin’ny varika maneran-tany -
AccueilVaovao SamihafaVakoka sy zava-boary : Rahampitso ny dihin’ny varika maneran-tany
Vakoka sy zava-boary : Rahampitso ny dihin’ny varika maneran-tany
04/10/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Zava-boahary ary vakoka mampiavaka an’i Madagasikara. Toa ny isan-taona, dia hotanterahina ny zoma 05 oktobra izao ny andiany faha-5 amin’ny « Dihin’ny varika maneran-tany », na ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an’ny gidro. Ankoatra ireo hetsika samihafa any amin’ny faritra, dia hanana ny hetsika hanamarihana izany ihany koa ny eto Antananarivo, izay karakarain’ny vondrona mpanadihady sy mpanao fikarohana momba ny gidro, na ny GERP. Ny diabe miainga etsy amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely hihazo ny ANS Ampefiloha no hanombohana izany. « Ezahina amin’ity hetsika ity ny fampahafantarana ny rehetra ny andraikitry ny varika eo amin’ny zava-boary sy ny tontolo iainana, sy ny antony tsy maintsy hiarovana azy ireny », araka ny fanazavana avy amin’ny Gerp. Noho ireo karazana gidro tsy fahita afa-tsy eto Madagasikara, dia sehatra iray mahasarika mpizahatany ihany koa ny fisian’ireny biby ireny. Manaporofo izany rahateo ny fahamaroan’ireo mpizahatany mitsidika azy ireny toa ny any Nosy Be, Andasibe…
« Varika harem-pirenena, namana ka tokony harovana », no lohahevitra entiny amin’ny fankalazana sy ny hetsika, ary ho hita taratra amin’ireo hetsika samihafa izany. Hisy rahateo ny lalao ara-panatanjahantena, fifaninanana isan-karazany, fampirantiana ary seho ara-javakanto hanamarihana izany etsy amin’ny ANS Ampefiloha. Ny talata teo dia efa nisantarana ny hetsika ny fandefasana horonantsary tetsy amin’ny Plaza Ampefiloha.
Hitondra ny anjara birikiny amin’ny fanafanana ny hetsika, sy amin’ny fanentanana ny olona amin’ny fiarovana ny varika ireo mpanakanto samihafa ahitana an’i Mafonja, Son ary Vahömbey.
Tafiditra ho isan’ny vakoka ny varika, noho izy ireo ahiana ho lany tamingana. Ireo karana gidro 105 fahita eran-tany dia hita eto Madagasikara avokoa, fa ireo karazany lehibe indrindra ihany no tsy misy eto amintsika. Ny 90% n’ireo no ahiana ho lany tamingana noho ny antony maro samihafa toa ny fihazana, ny doro tanety, ny fihinanana, ary ny tsy fanasiana lanja azy.
« Mila taratra eo anivon’ny fitsarana malagasy ny Fisandratana » io no fijery nozarain’ ny Filoham-pirenena omaly tetsy amin’ ny lapan’ny fitsarana Anosy, nandritra ny fanokafana tamin’ ny fomba ofisialin’ ny fotoam-pitsarana ho an’ny taona ...Tohiny